ဂိုးဖွုနျးလှနျးလို့ မနျစီးတီး အပွဈဒဏျခံရတဲ့ မနျစီးတီး 1:2 လိဒျဈယူနိုကျတကျ ပှဲပွီး ထုတျနုတျ ပွောစရာ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
ဂိုးဖွုနျးလှနျးတဲ့ မနျစီးတီး အပွဈဒဏျခံရ
မနျစီးတီးက နောကျကလိုကျကစားရတဲ့ အခွအေနကေို မရငျးနှီးလှနျးတာကို တှရေ့တယျ။ ဦးဆောငျဂိုးပေးခဲ့ရလို့ ခပြေဂိုးရလိုဇောနဲ့ တိုကျစဈကို အဆုံးထိတငျကစားတယျ။ ဖှငျ့ကစားလှနျးအားကွီးလို့ လိဒျဈရဲ့ အပွဈဒဏျပေးခွငျးကို ခံလိုကျရတာဖွဈတယျ။ ၁၀ ယောကျနဲ့ လိဒျဈကို ဖိကစားလှနျးပမေယျ့ ဂိုးဖွုနျးတီးမှုတှကေပဲ အဈတီဟတျရှုံးပှဲကို မမြှျောလငျ့ထားဘဲ ခံစားသှားစရေတဲ့ အခကျြလညျးဖွဈတယျ။ ၂၀၀၄ ခုနှဈနောကျပိုငျး မနျစီးတီးကို ပထမဆုံးအနိုငျရတဲ့ လိဒျဈရဲ့အောငျပှဲလညျးဖွဈတယျ။
၁၀ ယောကျတညျးနဲ့ ဇှဲကွီးလှနျးတဲ့ လိဒျဈရဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ အောငျပှဲ
တနျးတကျလာကတညျးက စိတျလှုပျရှားစရာ ကစားပုံကို ပွသခဲ့တဲ့ လိဒျဈက ဒီနပှေဲ့မှာ သူတို့အသငျးရဲ့ တိုကျပှဲစိတျပွငျးထနျမှု၊ နိုငျလိုစိတျကွီးမားမှုနဲ့ စုစညျးညီညှတျမှုကို ထပျမံပွသသှားခဲ့တယျ။ လကျရှိမနျစီးတီးလို အဆငျ့အတနျးမြိုးရှိတဲ့အသငျးကို ၁၀ ယောကျတညျးနဲ့ အနိုငျကစားဖို့ဆိုတာ ဘယျအသငျးမှမမကျနိုငျတဲ့ အိပျမကျပါ။ ဘီယယျလျဆာရဲ့အသငျးက ဒါကိုလုပျပွသှားခဲ့တယျ။
ပထမပိုငျးပွီးခါနီး အနီကတျနဲ့ ခံစဈလူ ကူးပါးတယောကျ အထုတျခံရလိုကျခြိနျမှာ ခံစဈကို စညျးစနဈတကြ စုစညျးကစားခဲ့တဲ့ ဒီအသငျးက ခပြေဂိုးပေးပွီးခြိနျမှာလညျး အသငျးရဲ့စညျးကမျးကွီးတဲ့ ကစားပုံက ပကျြယှငျးမသှားခဲ့ဘူး။ ဂိုးပေါကျတညျ့မှု ၂ ကွိမျမှာ ၂ ဂိုးရယူသှားခဲ့တယျ။
ခနျြပီယံလိဂျကို ပိုအာရုံစိုကျခဲ့တဲ့ ဂှါဒီယိုလာရဲ့မဟာအမှား
အားကစြရာကောငျးလှနျးတဲ့ စီးတီးရဲ့လူအငျအားတောငျ့တငျးမှုက ဂှါဒီယိုလာရဲ့ဖလားလေးလုံးအိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောနတောဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ာတော့ လူအလှညျ့အပွောငျး ခပျကွမျးကွမျးလုပျသှားခဲ့တယျ။ ခနျြပီယံလိဂျကို ပိုအာရုံစိုကျခဲ့တဲ့ ပပျရဲ့မဟာအမှားပါ။ ဒီဘရိုငျးနား၊ ရူဘငျ ဒီယကျဈ၊ ဂှနျဒိုးဝမျ၊ မာရကျဇျ၊ ရိုဒရီတို့လို အသငျးရဲ့အူတိုငျကစားသမားတှကေို ဖွုတျပွီး အရနျကစားသမားတှနေဲ့ တပျဆငျခဲ့တဲ့ နညျးဗြူဟာကွောငျ့ ပေးဆပျမှုကွီးမားလှနျးခဲ့တာဖွဈတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ မနျစီးတီးအိမျကှငျးမှာ ၄၅ မိနဈအထကျ လူ ၁၀ ယောကျနဲ့ကစားပွီး အနိုငျရတဲ့ ပထမဆုံးအသငျးက လိဒျဈအဖွဈ မှတျတမျးဝငျစခေဲ့တယျ။
VAR ဖောကျပွနျတဲ့ဇာတျထဲက လိဒျဈရဲ့ အနိုငျ ၃မှတျ
လီယမျ ကူးပါးက ဂဆြေူးဈကို ပွဈဒဏျဘောကြူးလှနျးမှုနဲ့ ပထမပိုငျးပွီးခါနီးမှာ ကှငျးလယျဒိုငျ အနျဒရေ မာရီနာက အဝါကတျပွသခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ VAR ကို ပွနျလညျကွညျ့ရှုပွီးခြိနျမှာတော့ အဝါကတျပွဈဒဏျကို ပယျဖယျြပွီး တိုကျရိုကျအနီကတျပွခဲ့တာဖွဈတယျ။ VAR ခငျးတဲ့ဇာတျက လိဒျဈကို အတျောလေးနဈနာစခေဲ့တာဖွဈတယျ။ နာကငျြစလေိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြမရှိတဲ့ ကူးပါးရဲ့ဖကျြထုတျမှုက အနီကတျနဲ့ မထိုကျတနျတဲ့ကြူးလှနျမှုလို့ ဝဖေနျမှုတှေ ရှိလာတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ VAR ဖောကျပွနျတဲ့ဇာတျထဲက လိဒျဈရဲ့ အနိုငျ ၃မှတျကလညျး VAR ရဲ့ မမြှတမှုတှကေို ဖုံးကှယျမသှားစဖေို့ လိုတယျ။
ခနျြပီယံဖွဈဖို့ သခြောပွီလား မနျစီးတီး?
ဒီပှဲက အံ့အားသငျ့စရာကောငျးတဲ့ရှုံးနိမျ့မှုဖွဈသလို မနျစီးတီးရဲ့ ဒီရာသီ EPL ရှူံးပှဲ ၄ ပှဲထဲက အဈတီဟတျမှာ ၃ ကွိမျမွောကျ ရှုံးခွငျးဖွဈတယျ။ အဆငျ့ ၂ နရောက ယူနိုကျတကျကို ၁၄ မှတျဖွတျပွီး ဇယားထိပျက ဆကျပွေးတယျ။ ယူနိုကျတကျက ၂ ပှဲလြော့ကစားထားတယျ။ မနျစီးတီးက လကျကနျြ ၆ ပှဲ၊ ယူနိုကျတကျက လကျကနျြ ၈ ပှဲကစားရမယျ။ မနျစီးတီး နောကျထပျ ၄ ပှဲနိုငျတာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို သိမျးနိုငျပွီဖွဈတယျ။ ဒါဟာ မနျစီးတီးအနနေဲ့ နောကျဆုံး ၄ နှဈအတှငျး ၃ ကွိမျမွောကျရယူနိုငျမယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျဆုဖလားလညျး ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
လိဒျဈကစားသမားတှရေဲ့ ဝိညာဉျက ရယူပေးတဲ့ အောငျပှဲ
ဒီစကားကို ဘီယယျလျတာကိုယျတိုငျက ထုတျပွောခဲ့တာပါ။ ဒီနအေ့ောငျပှဲက လိဒျဈကစားသမားတှရေဲ့ ဝိညာဉျက ရယူပေးခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သူတို့ရဲ့ ထကျသနျပွငျးပွတဲ့ တညီတညှတျတညျးစိတျဓာတျက အောငျပှဲနဲ့ ထိုကျတနျတယျလို့ သူက ဆိုခဲ့သလို မြှမြှတတနဲ့ ဆုံးဖွတျရငျတော့ ခွစှေမျးအရ အနိုငျရသငျ့တဲ့အသငျးက မနျစီးတီးလို့ ဝနျခံသှားခဲ့တယျ။
၂၀၁၂ ခုနှဈက သမိုငျးတကြော့ပွနျလညျမလား?
ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျခတျေက ယူနိုကျတကျရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈဖွဈရပျပါ။ ပရီးမီးလိဂျဖလားကို ရယူဖို့ ဇယားကို ဦးဆောငျထားခဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျက လကျကနျြ ၆ ပှဲတိတိသာ ကစားရမယျ။ အဆငျ့ ၂ နရောက မနျစီးတီးကို ၈ မှတျဖွတျတောကျထားခဲ့တယျ။ ရာသီသိမျးမှာတော့ အားလုံးထငျထားတာနဲ့ ဆနျ့ကငျြပွီး မနျစီးတီး ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ဗိုလျဝငျခံခဲ့တယျ။ အခုလညျး အလားတူဖွဈရပျက စောငျ့ကွိုနတောဖွဈတယျ။
ယူနိုကျတကျက လကျကနျြ ၂ ပှဲကိုသာ အနိုငျကစားရငျ စီးတီးနဲ့ ၈ မှတျအကှာကို ရောကျလာမယျ။ နှဈသငျးစလုံးက လကျကနျြထပျကစားဖို့ ၆ ပှဲသာကနျြရှိတော့ခြိနျမှာ ယူနိုကျတကျက လှနျခဲ့တဲ့ ၉ နှဈကို တကြော့ပွနျလကျစားခမြေလားဆိုတာ စိတျဝငျစားမှုအရှိနျ အမွငျ့ဆုံးကို ရောကျရှိနပေါတယျ။
ဂိုးဖြုန်းလွန်းတဲ့ မန်စီးတီး အပြစ်ဒဏ်ခံရ
မန်စီးတီးက နောက်ကလိုက်ကစားရတဲ့ အခြေအနေကို မရင်းနှီးလွန်းတာကို တွေ့ရတယ်။ ဦးဆောင်ဂိုးပေးခဲ့ရလို့ ချေပဂိုးရလိုဇောနဲ့ တိုက်စစ်ကို အဆုံးထိတင်ကစားတယ်။ ဖွင့်ကစားလွန်းအားကြီးလို့ လိဒ်စ်ရဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ ၁၀ ယောက်နဲ့ လိဒ်စ်ကို ဖိကစားလွန်းပေမယ့် ဂိုးဖြုန်းတီးမှုတွေကပဲ အစ်တီဟတ်ရှုံးပွဲကို မမျှော်လင့်ထားဘဲ ခံစားသွားစေရတဲ့ အချက်လည်းဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မန်စီးတီးကို ပထမဆုံးအနိုင်ရတဲ့ လိဒ်စ်ရဲ့အောင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်။
၁၀ ယောက်တည်းနဲ့ ဇွဲကြီးလွန်းတဲ့ လိဒ်စ်ရဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အောင်ပွဲ
တန်းတက်လာကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကစားပုံကို ပြသခဲ့တဲ့ လိဒ်စ်က ဒီနေ့ပွဲမှာ သူတို့အသင်းရဲ့ တိုက်ပွဲစိတ်ပြင်းထန်မှု၊ နိုင်လိုစိတ်ကြီးမားမှုနဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုကို ထပ်မံပြသသွားခဲ့တယ်။ လက်ရှိမန်စီးတီးလို အဆင့်အတန်းမျိုးရှိတဲ့အသင်းကို ၁၀ ယောက်တည်းနဲ့ အနိုင်ကစားဖို့ဆိုတာ ဘယ်အသင်းမှမမက်နိုင်တဲ့ အိပ်မက်ပါ။ ဘီယယ်လ်ဆာရဲ့အသင်းက ဒါကိုလုပ်ပြသွားခဲ့တယ်။
ပထမပိုင်းပြီးခါနီး အနီကတ်နဲ့ ခံစစ်လူ ကူးပါးတယောက် အထုတ်ခံရလိုက်ချိန်မှာ ခံစစ်ကို စည်းစနစ်တကျ စုစည်းကစားခဲ့တဲ့ ဒီအသင်းက ချေပဂိုးပေးပြီးချိန်မှာလည်း အသင်းရဲ့စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ကစားပုံက ပျက်ယွင်းမသွားခဲ့ဘူး။ ဂိုးပေါက်တည့်မှု ၂ ကြိမ်မှာ ၂ ဂိုးရယူသွားခဲ့တယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ကို ပိုအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ ဂွါဒီယိုလာရဲ့မဟာအမှား
အားကျစရာကောင်းလွန်းတဲ့ စီးတီးရဲ့လူအင်အားတောင့်တင်းမှုက ဂွါဒီယိုလာရဲ့ဖလားလေးလုံးအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ လူအလှည့်အပြောင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်သွားခဲ့တယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ကို ပိုအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ ပပ်ရဲ့မဟာအမှားပါ။ ဒီဘရိုင်းနား၊ ရူဘင် ဒီယက်စ်၊ ဂွန်ဒိုးဝမ်၊ မာရက်ဇ်၊ ရိုဒရီတို့လို အသင်းရဲ့အူတိုင်ကစားသမားတွေကို ဖြုတ်ပြီး အရန်ကစားသမားတွေနဲ့ တပ်ဆင်ခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာကြောင့် ပေးဆပ်မှုကြီးမားလွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ မန်စီးတီးအိမ်ကွင်းမှာ ၄၅ မိနစ်အထက် လူ ၁၀ ယောက်နဲ့ကစားပြီး အနိုင်ရတဲ့ ပထမဆုံးအသင်းက လိဒ်စ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့တယ်။
VAR ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်ထဲက လိဒ်စ်ရဲ့ အနိုင် ၃မှတ်
လီယမ် ကူးပါးက ဂျေဆူးစ်ကို ပြစ်ဒဏ်ဘောကျူးလွန်းမှုနဲ့ ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ ကွင်းလယ်ဒိုင် အန်ဒရေ မာရီနာက အဝါကတ်ပြသခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် VAR ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးချိန်မှာတော့ အဝါကတ်ပြစ်ဒဏ်ကို ပယ်ဖျယ်ပြီး တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ VAR ခင်းတဲ့ဇာတ်က လိဒ်စ်ကို အတော်လေးနစ်နာစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ နာကျင်စေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ ကူးပါးရဲ့ဖျက်ထုတ်မှုက အနီကတ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ကျူးလွန်မှုလို့ ဝေဖန်မွုတွေ ရှိလာတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် VAR ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်ထဲက လိဒ်စ်ရဲ့ အနိုင် ၃မှတ်ကလည်း VAR ရဲ့ မမျှတမှုတွေကို ဖုံးကွယ်မသွားစေဖို့ လိုတယ်။
ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ သေချာပြီလား မန်စီးတီး?
ဒီပွဲက အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်သလို မန်စီးတီးရဲ့ ဒီရာသီ EPL ရှူံးပွဲ ၄ ပွဲထဲက အစ်တီဟတ်မှာ ၃ ကြိမ်မြောက် ရှုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ အဆင့် ၂ နေရာက ယူနိုက်တက်ကို ၁၄ မှတ်ဖြတ်ပြီး ဇယားထိပ်က ဆက်ပြေးတယ်။ ယူနိုက်တက်က ၂ ပွဲလျော့ကစားထားတယ်။ မန်စီးတီးက လက်ကျန် ၆ ပွဲ၊ ယူနိုက်တက်က လက်ကျန် ၈ ပွဲကစားရမယ်။ မန်စီးတီး နောက်ထပ် ၄ ပွဲနိုင်တာနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မန်စီးတီးအနေနဲ့ နောက်ဆုံး ၄ နှစ်အတွင်း ၃ ကြိမ်မြောက်ရယူနိုင်မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ဆုဖလားလည်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
လိဒ်စ်ကစားသမားတွေရဲ့ ဝိညာဉ်က ရယူပေးတဲ့ အောင်ပွဲ
ဒီစကားကို ဘီယယ်လ်တာကိုယ်တိုင်က ထုတ်ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့အောင်ပွဲက လိဒ်စ်ကစားသမားတွေရဲ့ ဝိညာဉ်က ရယူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ထက်သန်ပြင်းပြတဲ့ တညီတညွတ်တည်းစိတ်ဓာတ်က အောင်ပွဲနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ သူက ဆိုခဲ့သလို မျှမျှတတနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ ခြေစွမ်းအရ အနိုင်ရသင့်တဲ့အသင်းက မန်စီးတီးလို့ ဝန်ခံသွားခဲ့တယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က သမိုင်းတကျော့ပြန်လည်မလား?
ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ခေတ်က ယူနိုက်တက်ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဖြစ်ရပ်ပါ။ ပရီးမီးလိဂ်ဖလားကို ရယူဖို့ ဇယားကို ဦးဆောင်ထားခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်က လက်ကျန် ၆ ပွဲတိတိသာ ကစားရမယ်။ အဆင့် ၂ နေရာက မန်စီးတီးကို ၈ မှတ်ဖြတ်တောက်ထားခဲ့တယ်။ ရာသီသိမ်းမှာတော့ အားလုံးထင်ထားတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး မန်စီးတီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ဗိုလ်ဝင်ခံခဲ့တယ်။ အခုလည်း အလားတူဖြစ်ရပ်က စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်တယ်။
ယူနိုက်တက်က လက်ကျန် ၂ ပွဲကိုသာ အနိုင်ကစားရင် စီးတီးနဲ့ ၈ မှတ်အကွာကို ရောက်လာမယ်။ နှစ်သင်းစလုံးက လက်ကျန်ထပ်ကစားဖို့ ၆ ပွဲသာကျန်ရှိတော့ချိန်မှာ ယူနိုက်တက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်ကို တကျော့ပြန်လက်စားချေမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန် အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။